नि:शुल्क आँखा शिविर अपेक्षाकृत सफल, बुर्तिवाङ महोत्सव गर्न छलफल ! – ebaglung.com
नि:शुल्क आँखा शिविर अपेक्षाकृत सफल, बुर्तिवाङ महोत्सव गर्न छलफल !
२०७३ माघ ५, बुधबार ०७:४७	Top News, थप समाचार
आँखा शिविरको समिक्षा निकट भविष्यमा कृष्ण कँडेल, बुर्तिवाङ २०७३ माघ ५ । बागलुङ उद्योग बाँणिज्य संघ बुर्तिबाङ ईकाइले गत पुस महिनामा सञ्चालन गरेको ३ दिने निशुल्क आँखा शिविरको समिक्षा गरेको छ । ईकाईको मंगलबार भएको बैठकमा शिविर अपेक्षा अनुसार सफल भएको निष्कर्ष आएको अध्यक्ष चिन्तामणी शर्माले ई बागलुङलाई बताए । उनले आगामीमाघ ८ गतेको बैठक पछी शिविरको आम्दानी खर्च सार्बजनिक गरिने जानकारी दिए ।
हिमालय आँख अस्पताल, पोखराको प्राविधिक सहयोग, बागलुङ उद्योग बाँणिज्य संघ बुर्तिबाङ ईकाईको आयोजना र नेपाल नेत्रज्योती संघ बागलुङको समन्वय तथा स्थानिय संघ संस्थासँगको सहकार्यमा पुस २२ गते देखि २४ गतेसम्म शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । शिविरबाट ८२ जनाको आँखाको शल्यक्रिया भएको थियो भने १ हजार ३ सय १० जनाले सेवा लिएका थिए ।
बैठकमा बुर्तिबाङ महोत्सव आयोजना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । जिल्ला विकास समिति बागलुङ, बुर्तिबाङ नगर विकास समिति, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायतका संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरि बुर्तिबाङ महोत्सव गर्ने विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष शर्माको भनाई छ । महोत्सवको विषयमा आगमी बैठकमा थप छलफल हुनेछ ।
बैठकले उद्योग बाँणिज्य संघको सदस्यता नविकरणका लागि आएका निवेदन माघ १५ गते भित्र बागलुङ उद्योग बाँणिज्य संघको कार्यालय पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । बुर्तिबाङ ईकाईमा ६८ जना व्यवसायी आवद्ध रहेका छन् ।
पत्रकार कंडेललाई नन्द–हरि सृजनशील पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिने !